Nofuel kupinda IAS China International Industry akanaka 2018
Sezvo basa inoratidzei pamusoro maindasitiri kushandisa michina pasi CIIF, IAS chiitiko renyika Industrial kushandisa michina Solutions, Production uye Process kushandisa michina, Electrical Systems, Industrial IT & Software uye Microsystems Technology. Kubudirira ezvidzidzo rapfuura kunovimbisa zvekuratidza somumwe chinonyanya kukwezva dzaishandiswa nhumbi ari kushandisa michina munda muna Asia, uye kuita kuti chive papuratifomu nani nyanzvi uye vanachiremba mumunda kuti pamwe.
The pashoo nzvimbo IAS 2017 kunosvika 56,000㎡, 618 exhibitors kunyika 18 uye nharaunda, akadai China, Germany, Japan, Korea, USA, Italy, Switzerland, France, Austria, Britain, Israel, Canada uye zvichingodaro. Munguva pashoo, 65 forum uye Misangano yaiitwa uye pamusoro 178,000 nyanzvi akatishanyira.
Nofuel Power ndiye kupinda IAS, redu control panel, kushandisa michina mhinduro midziyo, gwenya kuzvidzora zvikamu zviri yakakurumbira kwazvo dumba.
Post nguva: Sep-12-2018